मानव र मदिरा
१२६४ पटक पढिएको
कलेज रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा मलाई अध्ययनको शीर्षक छान्न मुस्किल प¥यो । परीक्षा नजिक आइरहेकाले मन आत्तिइरहेको थियो ।
के विषय र कुन क्षेत्र छान्ने अनि कसरी रिपोर्ट तयार पार्ने भनेर अलमलमा थिएँ ।
एक दिन मेरो बाबाको एक जना साथीले फोन गर्नुभयो । उहाँको घरमा हामी खाँदबारी बस्दा सबैभन्दा शुरुमा डेरा बसेका थियौं । बाबाको नम्बर माग्नुभयो, दिएँ । पुराना धेरै कुराहरू सोधेँ । त्यो मोबाइल सम्पर्कपछि मैले आफ्नो कलेज रिपोर्टको विषय छानेँ ।
सेकेन्डरी डाटाहरू कलेक्सन गरेँ । हाइपोथेसिस तयार पारेँ । पूर्वकार्यको अध्ययन गरेँ । अनि फिल्ड जाने निधो गरेँ । तर कहाँबाट शुरु गरुँ ? कसकसलाई ‘सेम्पल’को रूपमा प्रयोग गरुँ ? कस्ता प्रश्नावली तयार पारूँ ? निक्र्याेल गर्नै सकिनँ ।
जसको कारण थियो ४ वर्ष पहिले आंशिक रूपमा भए पनि मदिराको कारण मैले भोगेको पीडा, झेलेको दुःख र आर्थिक तथा मानसिक क्षति । जसको लेखाजोखा छैन । न मापनयन्त्र नै बनिएको छ । जुन म पटक्कै सम्झन चाहन्नँ र कसैले नसम्झाइदेओस् भनी मनमनै प्रार्थना गर्छु ।
कहिलेकाहीँ आफन्तले यसबारेमा सोध्दा हातको इशाराले बुढी औँला आफू अघिल्तिर तेस्र्याई मुखतिर लान्छु । विगतको त्यो दर्दनाक क्षणहरू सम्झना आँउदा कहालिन मन लाग्छ र उनीहरूलाई भन्न मन लाग्छ कि सोध्ने अरु कुरा छैन ?
मलाई त्यति एउटा प्रश्नले त यति चोट दिन्छ भने मैले छनोट गरेका ‘सेम्पल’ (छनोट भएका व्यक्ति) हरूसित त मैले कति कुरा लिनुपर्छ । उनीहरूको विगत कोट्याउन कति प्रश्न सोध्नुपर्छ । यसमा उनीहरूलाई कति चोट पर्दो हो ? जस्को जीवनमा मदिराले असह्य आघात पु¥याएको छ । मैले मेरो समाजशास्त्र विषयको रिपोर्ट बनाउने शीर्षक, क्षेत्र, विषय फेरि सबै चेन्ज गरेँ ।
यहाँ केही सत्य कथाहरू उल्लेख गरेको छु जसको एउटा पनि प्रश्न सोध्नुनपर्ने प्रत्यक्षदर्शी थिएँ म ।
१) १० वर्षअघिको एक मध्यरातमा अँध्यारो चिर्दै एउटा कुप्रो छाया सुटुक्क उत्तरको सडकतिर लम्कियो र अन्धकारमा अलप भयो । आधा रात कटेपछि बल्ल एउटा बस उसैलाई पछ्याउदै आएझैँ देखियो र रोकियो । त्यो मानव आकृति सोही बसमा उक्लियो र बिहानको मिर्मिरे उज्यालोसँगै तमोर नदी तटमा अवस्थित एउटा मन्दिरको गेटभित्र प्रवेश ग¥यो ।
त्यो छाँया थियो ६७ वर्षीया कृष्णमाया राई (नाम परिवर्तित) को । जीवनमा आएका हजारौं भेल र आँधीहरूको सामना उनले गरेकी थिइन् । आफन्तबाटै उपहार पाएको घाउ र चोटहरू पनि भाग्यको खेल सम्झेर सहजै सहिदिन्थिन् । गरिबी र अभावले थिचेको जिन्दगीलाई पनि दैवको दिल्लगी ठानेर सजिलै पचाउँदै साँझबिहानको छाक टार्न, नुनतेलको जोहो गर्न आफैँ अघि सर्थिन् । यसैगरी ३ छोरा १ छोरी आफ्नै हुर्काइन्, पढाइन् र बिहे गरिदिइन् ।
उनका श्रीमान् भने सधैँ मदिरामै मस्त रहे । उनी भन्छिन्, ‘नसोचेको कुरा भोग्नुपर्ने यो जिन्दगीले यस्तो मोड पनि लिन्छ भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनँ ।’ अन्ततः मदिराले परास्त पारिदियो उनको धैर्यलाई । जीवनको उत्तराद्र्धमा रक्सीले नै अलग धारमा बग्न बाध्य बनाइदियो उनको जिन्दगीलाई र उनले आफैँ रोजिन् एउटा आँगन जहाँ आफन्त र परिवारको न्यानो सहाराको कुनै गुन्जायस थिएन ।
समस्या र समयका प्रहार हाँसेर सहिदिने रौसे कृष्णमाया मदिराले धुत भएर राक्षस बनेका श्रीमान्का प्रहारहरू सहन नसक्ने भइन् । भोगाइहरूले हृदयमा पारेको चोट उनी आफूबाहेक कसैले नदेख्ने भए तापनि जँड्याहा लोग्नेको कुटाइ र सरसामानको झटारोले हानेको चोट र थिलथिलो भएको शरीर छरछिमेक र समाजबाट सधैँ लुकाउन सकिनन् ।
मदिराको लतबाट छुट्न नचाहने श्रीमान्को ज्यादतीबाट लाचार बनेकी कृष्णमायाले अन्त्यमा वृद्धाश्रममा सुस्ताइरहेका अन्य थकित सुस्केराहरूसँगै मिसिने निधो गरिन् र चट्टानजस्तै मुटु भएका मानिसहरू बस्ने कङ्क्रिटको शहर मध्यरातमा छोडिन् र बाँकी जीवन कटाउने ओत वृद्धाश्रमलाई रोजिन् ।
मदिराले दिएको दर्दको छापहरू बोक्ने एक प्रतिनिधि पात्र हुन् कृष्णमाया राई ।
२) एक समय सबैको आँखा बल्थ्यो त्यो परिवार देखेर । मध्य बजारमा ठूलो घर थियो । घरमा राम्रो व्यापार चल्ने कपडाको पसल, सुन्दर दुई छोरा, एक छोरी, बाबाआमाको उस्तै मिलेको जोडी, एक नमूना परिवार थियो त्यो । समय बेलगाम हुन्छ । कसैले एक सेकेण्ड रोकूँ भन्दा पनि रोकिन्नँ । लाखौँ युगहरू छोडेर आइसकेको हो ऊ । भेट्नु छ उसले अरु लाखौं युगहरू र छोड्नु छ नयाँनयाँ इतिहासहरू कोर्दै ।
सन्तानहरू वसन्तका फूलजस्तै मगमगाउन लागे । सुन्दरतामा कुनै कमी थिएन सबै सन्तानमा । जेठा छोराको विवाह अलि टाढै एउटा प्रतिष्ठित परिवारकी छोरीसँग भयो । कान्छाले आफँै रोजेर अन्तरजातीय विवाह ग¥यो । छोरीको पनि ठूलै पोष्टको सरकारी जागिरे सुन्दर युवकसँग विवाह भयो ।
सबै राम्रै चल्दै थियो । वृद्ध बाबाआमाले व्यापार धान्न नसक्ने भएपछि घर भाडामा दिइयो भने व्यापार गर्न पनि छाडे । सबैलाई फुर्सद थियो । सोचेजसरी नै रमाइलोसँग दिनहरू बितिरहेका थिए ।
जिन्दगीलाई थप रमाइलो बनाउन जेठो छोराले जीवनमा मदिराको प्रवृष्टि गराएर एउटा क्रुर अध्यायको आरम्भ गरे । शुरुमा मदिरालाई उनले महफिलमा नचाए । पछि बिस्तारै मदिराले उनलाई नचायो ।
नाच्ने क्रममा आफूलाई बिर्सिए । परिवार बिर्सिए, सन्तान बिर्सिए र केवल मदिरालाई मात्र सम्झिए । उनले मदिरालाई यति सम्झिए कि मदिराले उनलाई सधैँका लागि साथै लिएर गयो । म माध्यमिक शिक्षा पढ्नका लागि जब सदरमुकाम झरेँ तब ती दाइसँग मेरो प्रायः भेट हुन्थ्यो । उनको घर नजिकै हाम्रो डेरा थियो ।
म ८ कक्षा पढ्ने सानी फुच्ची थिएँ । उनले मलाई शायद याद गरेनन् होला तर म चिन्थेँ । उनको मदिरासँगको लगावको आक्कलझुक्कल प्रत्यक्षदर्शी थिएँ म । म जुन घरमा बस्थेँ त्यहा एक जना अत्यन्तै प्यारी मायालु निनी थिइन् । जसले बाल्यकालमै टुहुरा भएका आफ्ना भाइबहिनीलाई हुर्काएकी थिइन् र शिक्षाको उज्यालो घाम देखाएकी थिइन् ।
ऐला (रक्सी) बेच्नु उनको रहर नभई बाध्यता थियो । तर ऐलालाई अन्तरङ्गको गलत आवश्यकता बनाउनु प्रयोगकर्ताहरूको गल्ती हो । कहिलेकाहीँ ती दाइले त्यहाँ आएर आँखा चिम्म पारी एक गिलास ऐला बिनासितन एक सेकेन्डमा स्वाट्ट पारेको देखेकी थिएँ । उनकी गुडियाजस्ती छोरी र सुन्दर पत्नी थिए ।
मदिराले दाइको जीवन चुँडेर लगेपछि भाउजूले पनि पीडा भुल्ने सहारा मदिरालाई नै रोजिन् । छोरीको भविष्य र भरोसाको बारे सोच्ने साहस राखिनन् । अन्ततः त्यो सुन्दर गुडियालाई यो ब्रह्माण्डमा एक्लो छोडी उनि पनि अर्कै लोकतिर लागिन् । ती नानी अहिले लगभग २१ वर्षकी जवान भइसकिन् । जसलाई एक वर्ष अघि हेल्पिङ हेन्ड चाबहिलमा भेटेकी थिएँ । उनी कस्तो महसुस गर्छिन् होला ? के सोच्छिन् होला आफ्नो बाबाआमाको मदिरामय इतिहास सम्झेर ।
यो सम्झिँदा जो कसैको मन अमिलो हुन्छ नयन धमिलो हुन्छ । जुन मदिराको लतले डामेको अमिट छाप त्यो नानीको अन्तस्करणमा कति बल्झिरहन्छ होला जीवनभर ।
३) एक जमानामा सबैले शिवपार्वतीको जोडी भन्थे उनीहरूको जोडीलाई । म काकाकाकी भन्थँे । अन्तरजातीय प्रेमविवाह थियो उनीहरूको । काका काले काले दिलवाले काकी गोरी, क्षेत्रीकी छोरी पार्वती नाम थियो उनको । कहिलेकाहीँ देउता तथा पितृलाई चढाउन रक्सी चाहिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ विभिन्न कार्जेको प्रसाद ग्रहण गर्दागर्दै रक्सीमा रस भिज्यो पार्वती काकीको ।
काका सिपालु सिकर्मी थिए । बालबच्चा भए । जहान बढ्यो । जीवन निर्वाह गर्ने क्रममा केही त गर्नैपर्ने भयो । काकाको एक्लो कमाइले धौधौ पर्न लाग्यो घर चलाउन । थोरै पूँजीमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने भनी आफ्नै घरको दुई ढिकमा सानो होटल खोलिन् काकीले । होटलमा खाजा नास्ताको साथै मदिराले पनि स्थान पायो र बिस्तारै आफ्नो साम्राज्य जमायो । होटल राम्रै चल्दै थियो । मदिराको स्वाद थाहा पाइसकेकी काकीले बिस्तारै बिस्तारै होटलमा आउने ग्राहकले भन्दा आफूले धेरै पिउन लागिन् । रक्सीको वशमा परेपछि व्यापारको कामधन्दा उठाउनै नसक्ने भइन् ।
काकीको होटल बन्द भयो । रोगहरूको प्रविष्टिको लागि काकीको शरीरमा विभिन्न द्वारहरू खुले । मल्टि डिजिजको भण्डार बन्यो मदिराले गालेको काकीको कमजोर शरीर । बाल बच्चा सानै थिए तर रोगले त्यसो भनेन र उठायो क्षयरोगको साथसाथै कलेजोको रोगले काकीको प्राण ।
३ जना बालक छोराछोरीलाई स्याहार्दै आर्थिक उपार्जनको काम नियमित गर्न सकेनन् काकाले र दोस्रो विवाह नगरी धर पाएनन् । कान्छी पत्नीबाट पनि सन्तान भए । फेरि काकाको जीवनमा दोहोरियो उही मदिराले निम्त्याएको पीडा ।
पहिलेदेखि नै पिउँथे काकाले मदिरा । तर पिउने क्रम बाक्लिन थाल्यो । उनले मदिराको मात्रामा पनि वृद्धि गरे । राम्रोसँग काममा मन लगाउन छाडे । आयस्रोत खिइन थाल्यो । दिनहँु झगडा हुन थाल्यो घरमा । छोराछोरी छोडेर अर्कैसित कान्छी काकीले बाटो तताइन् । फेरि काका एक्लो बने । वैराग लाग्दो एक्लोपनमा रातदिनको आत्मीय साथी मदिरालाई बनाए काकाले । छोराछोरी राम्रोसँग टुङ्गो लगाउन सकेनन् । सबैले पढाइ छुटाए । सबै लाखापाखा लागे ।
काकाले सारा संसार शून्य देख्न थाले । उनको सुस्केरा सुन्ने कोही भएन । अन्ततः अरुण नदी किनारमा लाग्ने २०७५ सालको एकादशी मेलाको मध्यरातदेखी आफूलाई कुन शून्यतामा कहाँ अलप गराए कसैलाई केही पत्तो भएन । मदिराको सुरमा अरुण भेलमा हेलिए कि भनेर सारा संसार खोजी भयो तर अझैसम्म कहीँ कतै फेला परेनन् । काकाले अनन्त यात्रामा जाने कुन बाटो रोजे आजसम्म रहस्यको गर्भमै रहेको छ । मदिरा सेवनले निर्माण गरेका यस्ता फरकफरक कथाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा ।
कृष्णमाया, ठुल्दाइ, ठूली भाउजू, काका, पार्वती काकीजस्ता प्रतिनिसध पात्र भएका हजारौँ कथा छन् हाम्रो समाजमा । मदिराका कारण उनीहरूलगायत परिवारले पाएको पीडा र व्यथाको कुनै अभिलेख छैन । न त छाती चर्काउने दुखाइहरूको आयतनको नाप तौलने यन्त्र छ । न त मदिराले नष्ट पारेको सम्पत्तिको लेखाजोखा नै छ । न छ त्यसको कारण भएको आत्मप्रलयको कुनै क्षतिपूर्ति ।
इशापूर्वको १७०० वर्षदेखि मदिराको वैदिक इतिहास पाईन्छ । त्यसबेला सोम र प्रहमना नामको झोल पदार्थलाई मदिरा भनिएको छ । त्यसैको पान गर्नाले नै अधिकतर राक्षसहरूलाई राक्षसी कर्म गर्न उक्साउँथ्यो ।
उस बखत मदिरालाई यदाकदा औषधीको रूपमा प्रयोग गरे पनि समग्रमा यसलाई विषको रुपमा नै व्याख्या गरिएको छ । आयुर्वेदमा पनि अरिस्थासका नाममा नशालु झारबाट बनाइएको झोल कुनैकुनै व्याधिमा वैकल्पिक औषधीको रूपमा प्रयोग गरे पनि सकेसम्म सेवन नगर्नु, गर्नैपरे सक्दो कम गर्नू भन्ने सूक्ष्म अभिव्यक्ति पाइन्छ ।
यसबाट के थाहा हुन्छ भने मदिरा आजको युगको मात्र उत्पादन होइन । वैदिक कालदेखि नै यसको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो । तर मदिरापानपछि राम्रा भन्दा नराम्रा घटनाहरू नै धेरै भएका वैदिक कथाहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ ।
जस्तै, वारुणी नामको मदिरा सेवनबाट उत्पन्न झगडामा असुरहरूको विनाशको कथा र शुक्राचार्यले पटकपटक मर्नुपरेको कथा । मदिरा सेवन गर्ने क्षेत्री ब्राह्मणहरूलाई पाप लाग्ने भन्ने उल्लेखित श्लोकहरू अझै सुरक्षित छन् वेद र उपनिषदहरूमा ।
मदिरा अर्थात् रक्सी अन्तर्गत लोकल ठर्रादेखि रम, भोड्का, ह्विस्की, ब्रान्डी, स्कच आदि पर्छन् भने वाइन, बियर, निगार आदि जाँडअन्तर्गत पर्दछन् । समग्रमा सबैको काम नशा दिने नै हो । बेसुरा बनाउने नै हो । बुझ्नेको लागि सबै नशालु तरल पेय विषालु नै हुन् ।
मानिसको उत्पत्तिकालदेखि बिस्तारै परीक्षण र प्रयोग हुँदै आएको मदिरा विभिन्न जनजातिको विभिन्न संस्कार र कुल पूजाहरूमा अझै चलाउने परम्परा छ । प्राचीनकालमा मदिराको सही र सीमित सेवनले गर्दा यसको महिमा र नियमित प्रयोग हुँदै आएको केही अंशमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर वर्तमान समयमा मदिराको असीमित र गलत तरिकाले सेवन गर्दा भएका मानवीय क्षति, दुःख र दुर्घटनाको हिसाब गर्न सम्भव छैन ।
राजदरबारदेखि गरीबको झुपडीसम्म मदिराले बरबाद बनाएका अनेकौँ कथा किस्साहरू पढ्न, सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
जब मान्छे मदिराको उन्मादमा बेसुर हुँदै जान्छ तब परिवार, इज्जत र प्रेम पनि भुल्दै जान्छ । तर पनि किन हो मान्छे मरिहत्ते गर्छ मदिरामा ? मदिराको लतमा फसेर स्वास्थ्य ध्वस्त पारेका छन् । परिवारको बिल्लीबाठ बनाएका छन् । सम्बन्धहरू सखाप पारेका छन् र सम्पत्तिको नाश गरेका छन् । आपराधिक कर्महरू बढेका छन् ।
तैपनि मान्छेहरू सुखमा होस् या दुःखमा, हर्षमा होस् या पीडामा, भेट्दा होस् या छुट्दा, बैंसमा होस् या बुढ्यौलीमा होस् मदिरालाई नै साथी बनाउँछन् । चोक र गल्लीगल्लीका भट्टी पसलमा, रेस्टुराँ र बारमा, पार्टी तथा भोज भतेरमा जताततै रमाउँछन् मदिरासँगै । मदिराको लागि ज्यान दिएको भेटिन्छ । मदिराले ज्यान लिएको घटना र कथा त कति हो कति ।
सुन्दर सपना बोकेर विदेशिएका हजारौं युवा विषालु मदिरा सेवन गरेर मृत्यु भएको सामचार सुनिन्छ । मदिराले विभिन्न आपराधिक घटनाहरू गराउन पनि मद्दत गरेको पाइन्छ ।
विश्वका विभिन्न देशका इतिहासमा मदिराको प्रयोग र सेवनसम्बन्धी प्रसङ्गका दुर्घटना, अपराध र परिघटनाहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छ । तान्जनियाका गृहमन्त्री चाल्स किटवांगाले मदिरा सेवन गरी संसदमा उपस्थित भएकै कारण पद र प्रतिष्ठाबाट बर्खास्त हुनुपरेको थियो ।
भेटघाट, सामाजिक समारोह, विवाह, भोजभतेर, जमघट जताततै जम्ने मदिरा गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, शेर्पा आदि जातिको संस्कार र कर्मकाण्डमा अनिवार्य चाहिन्छ । यसले पनि मदिराको सेवनलाई प्रश्रय दिएको छ । वास्तवमा जनजाति समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुको मुख्य कारणहरूमा मदिरा पनि एक हो ।
मदिराको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा मानिसको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनदेखि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र नैतिक पाटोमा पनि यसले प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष असर पु¥याएको हुन्छ ।
१८ वर्षअघि सिविनले गरेको एक सर्भेअनुसार नेपालमा हुने विभिन्न आपराधिक घटना र हिंसाको ७३ दशमलव ४० प्रतिशत भाग मदिराकै कारण हुनेगरेको आँकडा पेश गरेको थियो । अहिले त्यसमा १ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक ३३ लाख र प्रत्येक १० सेकेण्डमा १ जनाको मृत्यु अत्यधिक मदिरा सेवनबाटै हुने गर्दछ । यो डाटा विश्वको वार्षिक मृत्युदरको ५ दशमलव ९ प्रतिशत हो । चिकित्सा विज्ञानका अनुसार २ सय प्रकारका रोग मदिरा सेवनका कारण लाग्ने गर्दछ ।
मदिरा सेवनका कारण हुने विभिन्न क्षतिमध्ये सवारी दुर्घटना पनि एक हो जसका कारण हजारौंको ज्यान गएको हुन्छ । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा २०७५ असार १ गतेदेखि ०७६ जेठ ३१ गतेसम्म जम्मा १ हजार १ सय ८२ ओटा दुर्घटना भए ।
ती दुर्घटनामा ३ सय ३४ जनाको तत्काल मुत्यु भयो भने ८ सय ६३ जना गम्भीर घाइते र १ हजार २ सय ७१ जना सामान्य घाइते भए । यीबाहेका ट्राफिक प्रहरीसम्म नपुगेका अरु पनि दुर्घटना हुन सक्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि मदिरा र मानव एक अर्काको परिपुरक ठान्नेहरूको जमातलाई मदिराप्रेमले देश, परिवार र स्वयम् आफूलाई दिलाउने आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षतिको गणना गर्न कहिल्यै अग्रसर भएको देखिन्नँ ।
भगवान बुद्धले मदिरा सेवनलाई मानव जीवनको अन्तरप्रकाशको विनाशक्रम मानेका छन् । ऋग्वेदले मदिरा एक प्रकारको मन्द विष मानेको छ । यो कुरा जान्दाजान्दै यसैमा मोहित हुन्छ मानव । मदिराबिनाको माहोल फिक्का मान्दछन् ।
युवादेखि वृद्धसम्म मदिरामा मस्त हुन पाउँदा संसार भुलेको पनि देखिन्छ । वास्तवमा अधिक मदिरापान गर्दा लाखौँ मानिसको स्वास्थ्य, सम्बन्ध र घरसंसार ध्वस्त हुन सक्छ । तर पनि यसको प्रयोग घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य र स्वच्छतामा सुधार गर्दै अपराध, भ्रष्टाचार र सामाजिक समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले सन् १९२० जनवरीमा अमेरिकाले देशको संविधानमा १८ औँ संशोधन गरी मदिरा उत्पादन, आयात, ढुवानी र बिक्रीमा निषेध ग¥यो ।
अमेरिकाको इतिहासमा विशेष कालखण्डको रूपमा लिइने उक्त समयलाई ‘नोबल प्रयोग’को रूपमा वर्णन गरिएको छ । तर यो नोबल प्रयोग पनि विफल भएको छ । यसको लामो इतिहास छ जुन यस लेखमा उल्लेख गर्दा लेख लामो र भद्दा हुने भयले समावेश गर्न सकिनँ ।
अन्ततः विश्वको शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले मदिरामुक्तिको लागि गरेको प्रयास (नोबल प्रयोग) विफल हुनुको कारण मानव र मदिरा अलग हुन नसक्नु नै रह्यो । विश्वमा कुनै पनि यस्तो मुलुक छैन होला जुन पूर्ण रुपमा मदिरामुक्त होस् ।
भारतले पनि मदिरामा पूर्ण बन्देज लगाउने प्रयास नगरेको होइन । दक्षिण भारतका केही ठाउँमा कोशिस गरे पनि सफल हुन सकेको देखिँदैन ।
कुनै स्थान मदिरामुक्त भए पनि त्यहाँका बासिन्दा मदिराको प्यासमा विभिन्न ठाउँमा जान्छन् । नेपालमा पनि प्रयास गरे पूर्ण रूपमा मदिरामुक्त हुन नसके पनि केही कमी हुने थियो होला । तर त्यो दिन कहिले आउने हो थाहा छैन ।
हरेक कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ । राज्यले मदिरा नियन्त्रणका नाममा केही प्रतिशत राजस्व बढाउनेबाहेक केही गर्न नसके पनि हरेक नागरिकले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरी मदिरामुक्त जीवन जिउने प्रयास गर्नुपर्छ । सके मदिराबाट टाढा रहने र नसके पनि मदिरासँगको सामीप्यतालाई सीमाभित्र राखी व्यवस्थित गरेमा स्वस्थ रहन सकिन्छ ।
मानिसको प्राण र जीवनको अनेकौं पाटोलाई असर पु¥याउने मदिरा कसैको अभिघात बानी नबनोस् । मदिरा नै कसैको पीडाको प्रादुर्भाव र दुःखद अन्त्यको कहानी नबनोस् ।